IT Help Desk Support - Hurbad
Xogta Learning Path-ka
IT Help Desk Support qofka ah wuxuu qaban karaa shaqooyinka, sida adeega macaamiisha, cilad bixinta hardware-ka iyo software-ka, diyaarinta kumbuyuutarada cusub, diiwaan galinta ciladaha ITga, u xilsaarida cilada waaxda ku shaqo leh. Xirfadaha ugu muhiimsan inuu leeyahay qofka ah IT support specialist-gu waa, Qancinta macaamiisha, kuwa gudaha ee u shaqeeya shirkada ama kuwa macaamiisha ah si howlahooda shaqo aysan u istaagan. Aaladaha la adeegsado si loo caawiyo macaamiisha waxaa kamid ah, email in laga jawaabo, telephone in laga jawaabo, ama si Qoral ah (webchat) in loo caawiyo macaamiilka, IT support specialist waa shaqada koowaad ee laga bilaabo marka aad rabto inaad lugta lagasho ku shaqaynta ITga .
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii USA/UK: $3,300*
Mushaarka lagu shaqeeyo bishii Somalia: $400*
*waxay ku xirantahay inta sanno ood khibrad shaqo leedahay mushaarka aad ku shaqo bilaabayso, balse waxaan kasoo qaadnay inta ugu yar ee lagu shaqeeyo, khibradaadu haday badantahay mushaarkaaku waa kabadan yahay intaas.
Koorsooyinka lagu noqdo IT Help Desk Support
IT Help Desk Support qofka ah waxaa kaloo looga baahanyahay inuu leeyahay xirfadaha shaqsiyeed sida; Hadal macaanida, waji furfurnaanta, daganaasho, dulqaad, dhagaysiga cabashada macaamiisha, howl karnimo, cod karnimo.
hada baro koorsooyinka hoose
CompTIA IT Fundamental+ waa koorso aas aas u ah barashada cilmiga ITga
$10 / Lifetime Access
CompTIA A+, waa koorso lagu baranayo aas aaska Computer Hardware iyo Software.
CompTIA N+ waa koorso lagu baranayo aas aaska Computer Networking oo dhan.
Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Windows 10.
Linux Ubuntu Desktop Essential Training
Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Ubuntu Desktop.
Koorsadaan waxaad kubaranee sida loo isticmaalo macOS Catalina.